Aqriso: Wararkii u dambeeyey ee doorashada HirShabelle oo maanta ka dhaceysa Jowhar | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Aqriso: Wararkii u dambeeyey ee doorashada HirShabelle oo maanta ka dhaceysa Jowhar
Aqriso: Wararkii u dambeeyey ee doorashada HirShabelle oo maanta ka dhaceysa Jowhar
Magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee HirShabelle waxaa saaka ka socota qaban-qaabadii ugu dambeysay ee ku aadan doorashada madaxweynaha cusub ee maamulkaasi iyo ku xigeenkiisa.
Doorashada ayaa saacadaha soo socda ee maanta ka dhici doonto xarunta baarlamaanka HirShabelle oo haatan laga dareemayo mashquul xoogan.
Xilka madaxweynaha ayaa waxaa u tartamaya illaa labo musharrax oo kala ah Cali Cabdullahi Xuseen (Guudlaawe) oo loo saadaalinayo guusha, horeyna u soo ahaa madaxweyne ku xigeenkii maamulkaasi iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo la aaminsan yahay inuu tartanka doorashada u camirayo Cali Guudlaawe.
Sidoo kale waxaa xilka madaxweyne ku xigeenka ku loolamaya Maxamed Maxamuud Cabdulle iyo Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo loo saadaalinayo xilkaasi, islamarkaana horey u soo noqday guddoomiyihii maamulka gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
Dad badan ayaa rumeysan in doorashada maanta ka dhaceysa Jowhar aysan laheyn xamaasad weyn, maadaama uusan jirin tartan iyo loolan u dhexeeya musharraxiinta.
Ammaanka ayaa dhinaca kale aad loo adkeeyey, iyada oo saacadihii u dambeeyey ciidamo dheeraad ah lagu daadiyey jidadka magaalada Jowhar ee gobolka Sh/Dhexe.
Dhismaha HirShabelle ayaa haatan gaba-gabo marayo, iyada oo horey loo soo xulay xildhibaanada labaad ee maamulkaas oo doortay guddoomiye iyo labadiisa ku xigeen.